आयुर्वेद Archives - बडिमालिका खबर
गौमुलमा निशुल्क आयुर्वेद तथा बैकल्पीक चिकित्सा शिविर सम्पन्न
बाजुरा–गौमुल गाउँपालिका २ दहकोटमा निशुल्क आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा शिविर सम्पन्न भएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको आयोजनामा शिविर सम्पन्न भएको जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नर्मदा कुवरले वताएकि छन् । शिविरमा ३ सय ९५ जनाले सेवा लिएका छन् । २ सय ६१ जना महिला, १ सय ४ पुरुष र ३० जना बालवालिकाले […]
एलोभेरा सौन्दर्य प्रशाधन एवं स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । यो क्याक्टस प्रजातिको एक बिरुवा हो, जो गर्मी एवं सुक्खा जलवायुमा उब्जाउ हुन्छ । यो व्यापक रूपमा टेक्सास, न्यू मेक्सिको, एरिजोना र क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी सीमा क्षेत्रहरुमा खेती गरिन्छ । यो वर्षौंको लागि आयुर्वेदिक औषधि बनाउन प्रयोग गरिँदै आएको हो । एलोभेरा जेलले हामीलाई घामबाट बच्न […]
बाजुरा–बुढिनन्दा नगरपालिकाको कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक द्धारा आयुुर्वेद उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । चिकित्सक द्धारा आयुर्वेद उपचार सेवा निरन्तर भएपछि आयुर्वेद उपचार गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गईरहेको आयुर्वेद चिकित्सक डा.अच्युत शाली घिमिरे वताएका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्तडीमा समेत आयुर्वेद चिकित्सक सेवा सञ्चालन छैन् । कोल्टिमा आयुर्वेद चिकित्सक मार्फत सेवा पाउँदा […]
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुरा कोरोनाका बिरामीलाई खोजेर परामर्श तथा सेवा दिदै
बाजुरा–जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराले कोरोना संक्रमितलाई परामर्श तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि बितरण गरिरहेको छ । कोरोना बिरामीलाई आफै सम्पर्क गरेर उनिहरुको स्वास्थ्य अबस्थाको बारेमा जानकारी सँगै उपचार तथा परामर्श गर्ने गरेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराकि बैद्य नर्मदा कुवरले वताएकि छन् । स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कोभिड १९ नया भेरिएन्टबाट संक्रमण […]
बिद्यालय योग शिक्षा र आयुबेर्द सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धी तालिम सम्पन्न
बाजुरा — बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा दुई ओटा तालिम सम्पन्न भएका छन । जिल्ला आयुबेर्द स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको आयोजनामा गरिएका बिद्यालय योग शिक्षा तालिम र आयुबेर्द सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धी तालिम समापन भएका छन । जिल्ला सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधी बिद्यालयहरु का शिक्षकहरुलाई पौष २ गते देखी सचांलन भएको तालिम र ४ गते देखी सुरु भएको […]
विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा अभिमुखीकरण तालिम संचालन
विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम बिहिबारबाट सदरमुकाम मार्तडीमा संचालन भएकाे छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रकाे अायाेजनामा साे तालिमकाे अायाेजना गरिएकाे जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रकी कार्यालय प्रमुख दिक्षा भण्डारीले बताएकी छन । अभिमुखीकरण तालिममा जिल्ला सामुदायिक र निजी विद्यालयका ९ जना शिक्षक सहभागी रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रकी प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिएकी छन् । […]
दालचिनी आफ्नो गुलियो गुलियो, पिरो पिरो स्वादका लागि परिचित छ । जाडोयाममा यसको सेवन निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसको प्रयोग एक स्वादिष्ट मसलाको रुपमा गरिन्छ । यसबाहेक दालिचिनी थुप्रै स्वास्थ्य लाभले भरिपूर्ण हुन्छ । यस्तोमा के तपाईंलाई दालचिनी तौल कम गर्न पनि सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ ? यसमा एन्टी डायबिटिक, एन्टी अक्सिडेन्ट र […]
हिन्दू धर्ममा गाईलाई आमा मानिएको छ । संसारको सबैभन्दा प्राचीन धर्मले एउटा सामान्य पशुलाई आमाको स्थान दिनु र यसको मल एवं मूत्रलाई परमपवित्र मान्नु सामान्य नभएर विशेष रहस्यको विषय हो । अझ आयुर्वेदमा त गौमूत्रलाई अति महत्वपूर्ण औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । पाँचहजार साल पुरानो मानिने आयुर्वेदिकग्रन्थ सुश्रुत संहिताको सूत्रस्थानको ४५औ अध्यायमा गौमूत्रको अनेकौं […]
कोभिड–१९ महामारीकाबीच पछिल्लो समयमा आयुर्वेदिक उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । आयुर्वेदिक उपचारले साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले यसतर्फ नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी हिक्मत चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, “आयुर्वेदिक उपचारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको […]
डा. मित्र पाठक — अहिले विश्वमा कोभिड–१९ संक्रमित साढे तीन करोड नाघिसकेका छन्। मृत्यु हुने साढे १० लाख कटेका छन्। एक जना सक्रिय संक्रमित देखिएपछि गएको ११ चैतमा मुलुकभर बन्दाबन्दी घोषणा गरिएको नेपालमा अहिले संक्रमितको संख्या एक लाख नाघिसकेको छ। २३ असोजसम्म ६०० भन्दा बढी नेपालीको ज्यान पनि गइसकेको छ। यसबीच कोरोनाभाइरसका खोप बन्दै गरेका, […]
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा तितेपातीको तेल उत्पादन शुरु गरिएको छ । करिब १५ वर्षअघि नै सोको उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गरिएको भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले चल्न सकेको थिएन । स्थानीय जडीबुटी सहकारी संस्थाले झुम्सामा तितेपातीको तेल उत्पादन शुरु गरिएको सहकारीका अध्यक्ष झपेन्द्र जिसीले जानकारी दिए । उनले आगोबाट पानी तताई त्यसको बाफबाट मेशिनको प्रयोग गरी तीतेपातीको […]
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराले क्वारेनटाइनमै पुगेर योग अध्यास र निशुल्क औषधि बितरण गरेको छ । क्वारेनटाइनमा बसेकालाई आयुर्वेद औषधि बितरण सँगै तनाब ब्यबस्थापन, मनोवल गराउन योग सम्बन्धि जानकारी तथा योग गराउने काम भएको कार्यलयले वताएको छ । कोभिड १९ को बेला प्रतिरक्षात्मक बढाउनका लागि आयुर्वेद औषधि वितरण गरेको कार्यलय प्रमुख भण्डारीले वताएकि छन् । […]
बाजुरा– जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको बाजुराका क्याम्पसका क्वारेन्टिनमा बसेकालाई जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराले याेग शिबिर संचालन गरेकाे छ । भारत लगायत बिभिन्न ठाउँबाट अाएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाइ योगा अभ्यास गराएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराका कार्यालय प्रमुख दीक्षा भण्डारीले बताइन । उनले क्वरेन्टिनमा बस्दै आएकाको तनाव व्यवस्थापन र उच्च मनोबल बनाउनका लागि योगाभ्याससम्बन्धी जानकारी सहित […]